Wiil 6 jir ah oo walaalkii ku dilay baastooladii aabihii | Gaaroodi News
Wiil 6 jir ah oo walaalkii ku dilay baastooladii aabihii
Ciidamada Booliska ee Chicago ayaa maxkamada magaaladaasi keenay waalidka laba caruur ah oo is toogtay,kaas oo mid kamid ahi ahaa saddex sanno jir,waxaana aabahan lagu haystaa inuu khatar geliyey nafo, sidoo kalena hubkiisu galaaftay nafta caruur yar yar.
Caruurtan oo laba ahaa ayaa mid ahaan la toogtay kadib markii ay ciyaareen ciyaarta loo yaqaano Tuug Iyo Boolis oo dhulka Somalidana aad looga ciyaaro, waxaanu mid kamid ah oo ahaa kii metelaayey Boolisku helay bastoolad uu aabihii lee yahay,taas oo keentay inuu kii tuuga metelaayey ku toogto.
Caruurtan oo aan magacyadooda la sheegin ayaa aabohood oo da’ahaan jira 25 sanno lagu xukumay sharciga ubadka ee dalkaasi , iyada oo keeni karta inuu sannado badan xabsi mutaysto.
Caruurtaasi awoowgood oo telefishan laga lee yahay dalkaasi uu waraystay ayaa sheegay in ay caruurtaasi ahaayeen kuwo ciyaraayey, kadibna ay heleen hubkii aabohood oo isku dileen, iyaga oo ciyaar ka dhiganaaya.
Dhacdadan ayaa lagu daabacay wargeyska Washington Post oo uu kazoo xigtay wargeyska Dawan,waxaanay dhacdadani dhacday 9 subaxnimo ee maalintii axadii ina dhaaftay, iyada oo wiilka xabadu ku dhacday dad jaarka ahi ula yaaceen dhakhtarka, halkaas oo uu markii dambe wiilkaasi ku dhintay.
Looyarka u doodaaya caruurtan aabohood ayaa sheegay in waqtigaasi ay caruurtu ahaayeen kuwo ku ag ciyaaraayey awoowgood,sidoo kalena aabohood ahaa mid shaqada ku maqan, halka hooyadoodna ay cunto siinaysay ilme yar oo hal sanno jir ah oo ay dhashay, arrintuna ay si kedis ah u dhacday.
Dhacdadan ayaa noqotay mid warbaahinta caalamka iyo ta Maraykankaba aad usoo jiidatay, waxaanay toddobaadkan ahayd ta loogu xiisaha badan yahay.